(Emelitere ikpeazụ On: 21/08/2020)
Mmiri mmiri Marmore ruru 165 m na ndị kasị ogologo si 3 na ịdị elu nke 85 m. Ya mere, mmiri kachasị asọpụ mmadụ mere na Europe bụ ite mmiri Marmore. This breathtaking waterfall is Located in the heart of the Umbria region and was created by ancient Romans.
Nkume na-acha ọcha na isi iyi nke nwere ọtụtụ mmiri nwere ike iji ụgbọ oloko si Rome Termini gaa obodo Terni mfe. Insgbọ oloko na-aga Terni na-agakarị ma ụgbọ oloko na-apụ kwa awa. Mgbe i rutere n’ọdụ ụgbọ oloko Terni, enwere ụgbọ ala nke nwere ike iburu gị na nsụda mmiri. There is an entrance fee to the waterfalls.
Otú ọ dị, ya na tiketi Trenitalia ị ga-enweta ego na nke ahụ bụ uru ọzọ maka ụgbọ njem iji ụgbọ aga na mmiri Marmore:)
Waterzọ ọmarịcha mmiri ndị foto na intali bụ Italy Waterfallmal bụ obodo nta Di Saturnia. Odikwa na Tuscany, Mmiri iyi Saturnia bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma ikuku iyi ebighi ebi na Europe. Obere obodo a bụ ebe nnukwu iyi na-ekpo ọkụ site na oge ndị Rom. Oge ezumike Tuscany gị agaghị ezu ezu na-enweghị ụbọchị na mmiri iyi ọkụ Saturnia. Isi iyi ndị ahụ dị mma maka ntụrụndụ mgbe ha gafesịrị ọmarịcha isi iyi ndị ọzọ dị nso, Mill na ọdịda nke Gorello.
Ọ kachasị mma ileta mmiri iyi Rhine n'oge ọkọchị mgbe ice gbazere ma ihe niile gbara gburugburu bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mmiri Rhine bụ 50 ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ na Zurich ma enwere ọdụ ụgbọ oloko abụọ n'akụkụ abụọ nke ọdụ mmiri ahụ. Ya mere, Ọ dị mfe ịga na mmiri iyi ndị dị ịtụnanya maka ezinụlọ na solo njem.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya gabigara ókè ma chọọ ihe mara mma mara mma, ị ga - ahụ n'anya mmiri Stuibenfall nke mbu na Tyrol. Àkwà mmiri na-akwụsịtụ na ụlọ elu ndị na-agba gburugburu na-eme ka mkpọda gaa na mmiri iyi a dị ịtụnanya na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali. Terol kachasị ogologo na mmiri kachasị ukwuu bụ 2.4km, yabụ ị nwere ike inyocha ya n’ụbọchị njem njem. The hiking nzọ ụkwụ bidoro ma mechaa n’ebe a na-adọba ụgbọala n’obodo Umhausen.
Odikwa na Austria ogige ntụrụndụ mba kachasị ukwuu, Ugbo elu nke Tauern National Park, nsụda mmiri nke Krimmeta bụ ide mmiri atọ, eru 1490 m na ịdị elu na 380 elu. Oke ohia mgbe ochie, fauna, Mgbada uhie na ugo na-acha edo edo bụ naanị ole na ole n'ime ndị bi na ogige ahụ nwere ike ịgafe gị ụzọ n'ụzọ ụzọ isi banye na mbupụ mmiri ọzọ dị ịtụnanya na Europe. Ọ bụrụ n’inwe ụlọ njem na-anụ ọkụ n’obi ma nweekwa ọfụma, ogige ntụrụndụ a na ebe mmiri Krimml ga-abụ njem na-agaghị echefu echefu na ugwu ndị dị na Austria.
Nọ na ndagwurugwu ahịhịa ndụ juru, akwa Gavarnie dị elu na France bụ 422 mita dị elu ma bụrụ onye a ma ama n'etiti ndị njem. Site na nlele nke Hautes Pyrenees, ndagwurugwu Gavarnie bụ ma ihunanya na nke zuru oke maka ndị njem siri ike na-achọ inyocha na imeri Pyrenees French. Gavarnie nsị mmiri bụ naanị 40 drivegbọ njem nkeji si n'obodo Gavarnie.
Europe bu ezigbo agwa ndi njem na ezinulo ha. Ọ dị mfe iji gafee Europe na ọmarịcha mmiri iyi niile dị na listi anyị nwere ike inweta ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala, maka njem ụbọchị ma ọ bụ maa ụlọikwuu, maka ndị njem ma ọ bụ ndị mbido nwere ahụike na-enwe ọhụụ na ịchọpụta ihe kachasị mma na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Ff Beautiful Water Beautifulf f N’atu mmiri na Yurop” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-waterfalls-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)